Phil Neville oo wadahadal kula jiro kooxda Valencia - BBC Somali
Phil Neville oo wadahadal kula jiro kooxda Valencia
Image caption Phil Neville iyo Ryan Giggs waagii ay Manchester United ka wada tirsanaayeen
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester United iyo xulka Ingiriiska, Phil Neville, ayaa waxa uu wadahadal kula jiraa kooxda Valencia hasayeeshee lama magacaabin inkastoo kooxda reer Spain ay sheegtay in difaacii hore ee Ingiriiska uu yahay kaalayaha cusub ee tababaraha kooxdaasi.
Valencia ayaa magaacabista Neville, oo 38 jir ah, uga dhawaaqday barteeda rasmiga ah ee internet-ka.
Sikastaba ha ahaatee, Neville ayaa BBCda u sheegay in inta ay wadahadalada socdaan ay jirto wado la maro ka hor inta aanan la gaarin wax heshiis ah.
Neville ayaa kooxda Manchester United waxa uu tababare ahaan uga soo hoos shaqeeyay tababarihii kooxdaasi ee David Moyes, sidoo kalana waxa uu falanqeeye ka ahaa taleefishin.
Waxa uu badeli doonaa Scot Ian Cathro, kaasi oo lagu wado inuu la midoobo tababare Steve McClaren-ka dhawaantan la wareegay tababarka kooxda Newcastle.
Tababaraha kooxda Valencia Nuno ayaa ku amaanay Neville inuu yahay ciyaaryahan leh khibrad heersare ah iyo aqoon, waxa uuna intaa ku daray in uu la qabsan doono habka ay kooxda u dheesho.
Image caption Paul Scholes, Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, David Beckham iyo Gary Neville.
Phil Neville ayaa muddo labaatan sano ah ku soo qaatay kooxda Manchester United halkaasi oo uu yaraantiisii ciyaaraha ka soo bilaabay, isagoo ciyaartii ugu horreysay u dheelay kooxdaasi 1995-tii, waxa uuna ku guulaystay 6 koob oo horyaalka Ingiriiska ah, 3 FA Cup iyo hal koob oo Horyaalada Yurub ah, ka hor inta uusan ku biirin kooxda Everton 2005-tii.
Neville ayaa in ka badan 300 oo jeer waxa uu u saftay kooxda Everton, iyadoo ciyaarahana uu ka fariistay 2013-kii markaasi oo uu ka mid noqday kooxda tababarka ee Manchester United.
Milkiilaha kooxda Valencia Peter Lim ayaa saami ku leh kooxda Salford City, oo ah koox aan horyaalna ka dheelin oo ay wada milkiyaan ciyaaryahanadii hore ee ay Neville ka wada tirsanaan jireen kooxda Manchester United ee Ryan Giggs, Gary Neville iyo Paul Scholes.
Valencia ayaa xagaagii la soo dhaafay kaalinta afraad ku dhameysatay horyaalka La Liga, waxa ayna kooxdu ka qeyb qaadan doontaa isreebreebka koobka Horyaalada Yurub ee xagaagan.